Famantarana ny GPS Tracker ho an'ny olona manana fahasembanana | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Rehefa manan-janaka manokana ianao dia fotoana mety izao handinihana ny fikatsahana fepetra fiarovana fanampiny hiarovana azy amin'ny fotoana rehetra. Izany no antony nahatongavako androany hiresaka momba ny GPS tracker izay iray amin'ireo safidy tsara indrindra hanananao rehefa manara-maso ny asan'ny zanakao.
Izany dia satria noho ireo tompon-toerana ireo dia mora mahita ny zanakao raha sendra very izy ireo. Hanome anao fiadanan-tsaina bebe kokoa hatrany izany amin'ny fotoana rehetra satria ho fantatrao tsara ny toerana misy ny zanakao.
Fa maninona aho no hividy GPS Tracker?
Ny fiarovana ny ankizy dia laharam-pahamehana hatrany ho an'ny ray aman-dreny, ary rehefa manan-janaka ianao dia tsy tokony hohamaivaninao ny fepetra azonao alaina. Ny ankizy mora very tsy ho eo na aiza na aiza, noho izany, dia ilaina ny fomba hahitana azy ireo.
iHelp 3G / 4G GPS fanaraha-maso elatra, Keychain (OMGGPS40D)
Misaotra an'ny GPS tracker ho an'ny ankizy dia ho fantatrao tsara ny toerana misy ny zanakao, ary ao anaty vonjy maika no hanananao safidy ao. Misy ihany koa ny mpitsoka manana QR, izay ahafahan'izay mahita ny zanakao hifandray aminao.
Ny fiadanan-tsaina raha mahalala hoe aiza ny zanakao tsy mendrika ny vidiny anao. Ahoana ny amin'ny fandraisana hafatra rehefa tonga any am-pianarana aho? Ary fampitandremana raha avelanao ny lalanao mahazatra? Amin'ny alàlan'ny mpitsoka ho an'ny ankizy dia hanana izany ianao.
Ny ankizy ankehitriny dia tsy afaka mankafy ny fahalalahana mitovy taminay teo amin'ny taranaka teo aloha fa manana ny teknolojia farany indrindra izy ireo hanampy azy ireo.
Misaotra ny zaza mpitsikilo izay tsy azontsika fantarina ny misy azy fa afaka mifandray aminy ihany koa. Ny modely sasany dia ahafahanao manao antso fampitandremana raha misy lesoka ary betsaka ny fitaovana hafa lazainay aminao eto ambany.
Ny famelana azy hankany amin'ny toerana sasany irery fa tsy voatery hiaraka aminy hatrany dia hampitombo ny fahaleovan-tena sy fahatokisan-tena bebe kokoa aminy.
Avelao ny zanakao hankafy ny maha-zaza miaraka amin'ny fiarovana ny fahalalana fa tsy ho irery izy irery.
Nahoana aho no tokony hampiaraka amin'ny zanako lahy?
Nandeha nianatra izy irery
Mitombo haingana be izy ireo ary amin'ity taona ity dia te handeha irery izy ireo. Tsy afaka manaraka azy isan'andro ianao ao ambadiky ny zoro toy ny mpitsikilo. Mila fahaleovan-tena sy fiarovana ny fahafantarana fa tsy miala amin'ny lalany izy. Apetraho ao anaty paosinao na kitapom-batsy ny mpitsoka ankizy iray.
Fandroahana amin'ny agglomerations
Famantarana kely ary tsy eo akaikinay intsony. Any amin'ny toeram-pivarotana, amin'ny marim-pototra na amin'ny firavoravoana rehetra dia avelanao hialany amin'ny tanana isika ary ho raiki-tahotra. Antsoy izy amin'ny alàlan'ny fiambenany ho an'ny ankizy ary handre ny feonao dia hangina mandra-pahatonganao miaraka aminy indray ary ho atahorana ny zava-drehetra.
Fiarovana mialoha ny zavatra rehetra
Milalao mangingina amin'ireo filamatra ireo izy, nijery kely ny telefaona finday izahay ary izany fotoana izany dia manome antsika ny fo rehefa mijery isika ka tsy eo amin'ny toerana iray ihany. Hamarino amin'ny findainao izay misy anao na mandray fampandrenesana ny zanakao nahita azy rehefa miala ny halavirana iray.
Amin'ireo tranga rehetra ireo dia zava-dehibe ny fananana mpamantatra zaza manokana voafatotra amin'ny kitapom-bolanao, fehikibo… na famantaranandro eo amin'ny hatotanin-janantsika. Izy io koa dia antoka fa ny ratsy rehetra dia hanana fiafarana sambatra sy haingana be mampihena ny fotoana fikarohana.
Na dia tsy eo amin'ny tranga voalaza etsy ambony aza ianao dia tokony hojerena ihany koa ny safidy amin'ny fiarovana ny kely ao an-trano ho toy ny fitandremana fotsiny. Indraindray, ny fanelingelenana kely dia mety hitarika antsika hanana tahotra lehibe na dia eo aza ny fikarakarana rehetra ataontsika ao.
Fa inona marina ny tena atao ary ahoana no fiasan'ireo mpitsikilo zaza?
Ny mpitazana zaza dia fitaovana kely azo apetraka ao anaty kitapo na akanjo ataon'ny zaza. Indraindray tsy ilaina izany na fantatrao hoe inona no tanjonao. Izy io dia mety ho famantaranandro, peratra fanalahidy na pendant. Mampahafantatra antsika ireo fitaovana ireo raha miala amin'ny sisintsika ilay zaza. Raha mamela faritra voalamina toy ny azo antoka ianao. Mampahafantatra anao ny toeranao mihitsy aza izy ireo. Ary amin'ny alàlan'ny fampiharana finday tsotra.
Ny modely maoderina ataon'ny mpivarotra zaza dia mamela antsika hiresaka amin'ny zanatsika na hanao azy hiantso vonjy maika aza.
Miankina amin'ny teknolojia sy ny fampisehoana dia afaka mahita fitaovana azo itokisana kokoa noho ny hafa isika. Mety ho liana amin'ny sehatra lehibe kokoa isika na manana GPS na tsia. Mahaliana ny manamarina raha mampiasa GPS / LBS izy ireo. Ny sasany dia mila famandrihana hisoratra amin'ny serivisy ary ny hafa kosa tsy manao izany.
Inona no tokony hoeritreretiko mba hisafidianana ny tsara indrindra ho an'ny ankizy?
Ny fanaraha-maso GPS dia mety ho tena ilaina nefa tsy ny teknolojia tena tsara foana mba hifehezana zaza.
Misy karazana mpikaroka zaza samihafa ary ny tsirairay dia natao ho an'ny fampiasana sy vahaolana manokana. Miovaova ny filàna arakaraka ny taonan'ny zaza, ny halaviran'ny fahombiazany, ary ny karazana fanaraha-maso…
Apetraho amin'ny toerana iray ny fomba fijery rehetra, amin'ny fomba toy izao, afaka manapa-kevitra manapa-kevitra ianao hoe iza no modely eo an-toerana ho an'ny ankizy izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao sy ny tsy izy. Ary noho izany dia misafidy mora kokoa ny zanaka tsara indrindra amin'ireo karazana marika sy teknolojia isan-karazany.
5402 Total Views 3 Views Today